ISO Bore and shaft tolerances - Ever-Power Transmission
0086-571-88220973 / 88220971 [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
တစ် ဦး ရိုးတံမှပြုပြင်တာတွေ၏နည်းလမ်းများ
က ISO Bore နှင့်ရိုးတံသည်းခံစိတ်
TOLERANCES (microns) SHAFTS TOLERANCES (microns)
Clearance fit Transition fit ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မထိုက်မတန်
H7 H8 f7 g6 k6 n6 p6 s6
ထက် သို့ mini ကို။ maxi. mini ကို။ maxi. mini ကို။ maxi. mini ကို။ maxi. mini ကို။ maxi. mini ကို။ maxi. mini ကို။ maxi. mini ကို။ maxi.
030 10 +014 + -5 -16 -2 -8 +6010 + +4 12 + +6 20 + 14 +
360 12 +019 + -10 -22 -4 -12 +9 +1 16 + +8 20 + 12 + 27 + 19 +
6 10015 +022 + -13 -28 -5 -14 10 + +1 19 + 10 + 24 + 15 + 32 + 23 +
10 18018 +027 + -16 -34 -6 -17 12 + +1 23 + 12 + 29 + 18 + 39 + 28 +
18 30021 +033 + -20 -41 -7 -20 15 + +2 28 + 15 + 35 + 22 + 48 + 35 +
30 50025 +039 + -25 -50 -9 -25 18 + +2 33 + 17 + 42 + 26 + 59 + 43 +
50 80030 +046 + -30 -60 -10 -29 21 + +2 39 + 20 + 51 + 32 + 72 + 53 +
80 120035 +054 + -36 -71 -12 -34 25 + +3 45 + 23 + 59 + 37 + 93 + 71 +
WhatsApp / Wechat / Telegram / Line / Viber:
Addr: 789 SHENHUA RD, Hangzhou, Zhejiang, တရုတ်။ 310030
တရုတ်နိုင်ငံရှိစက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများနှင့်တင်ပို့သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှော့ချသူများ၊ ကြယ်ပွင့်များ၊ စက်မှုနှင့်သယ်ဆောင်ကွင်းဆက်များ၊ ခါးပတ်များ၊ စက်သီး၊ ဂီယာ၊ ထိန်သိမ်း၊ ဂီယာအုံများ၊ မော်တာများ၊ PTO ရိုးတံများ၊ တွန်းနှင့်များစွာသောအခြားထုတ်ကုန်။ အသေးစိတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Ever-Power ဂီယာထုတ်လုပ်မှုဂီယာအုံနှင့်အမြန်နှုန်းလျှော့ချစက်များ၊ ကြယ်များ၊ ဂီယာများ၊ ချည်နှောင်စက်များ၊ ဆက်တင်များ၊ ဆက်တင်များ၊ လျှပ်စစ်မော်တာများ၊ PTO ရိုးတံများထုတ်လုပ်သူများလမ်းညွှန်၊ HZPT.COM
ဖက်စ်: + 86-571-88220651
Addr: SHENHUA ROAD, HANGZHOU, တရုတ်။ 310031
Speed ​​Reducer & gearboxes
V- ခါးပတ် - စက်သီး
© 1999-2021 Hangzhou Ever-Power Transmission Co. , Ltd.
အထက်ပါအချက်အလက်များသည်ဗဟုသုတများမျှဝေရန်နှင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ထုတ်လုပ်သူများမိတ်ဆက်ပေးရန်သာဖြစ်သည်။ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောရည်ရွယ်ချက်။ အကြောင်းအရာအားလုံးသည်ကွန်ယက်မှရရှိသည်၊ ဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ပါကသို့မဟုတ်ကန့်ကွက်ထားသောသတင်းအချက်အလက်ကိုသင်တွေ့ရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ၊ ချက်ချင်းဖျက်ပစ်ပါမည်။ မူရင်းပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်သူ (OEM) အစိတ်အပိုင်းနံပါတ်များသို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအသုံးပြုခြင်းဥပမာ - John Deere® Gearbox, Comer® Gearbox, Bush Hog® Gearbox, Omni® Gear စသည်တို့သည်ရည်ညွှန်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်ပြီးထုတ်ကုန်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့်မူရင်းကိုအစားထိုးခြင်းများအတွက်သာဖြစ်သည်။ အပိုင်းအစများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်ဤနေရာတွင်ပါရှိသောအစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများသည် OEM မှကမကထပြု၊ အတည်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိပါ။